Imidlalo ye-Telkom Knock Out ingashintsha ukudla etafuleni | News24
Imidlalo ye-Telkom Knock Out ingashintsha ukudla etafuleni
UMQHUDELWANO ovamise ukuxaka iningi lamaqembu amakhulu i-Telkom Knock Out ingaphinda futhi ixhele abaningi.
Ngendlela izinto ezibukeka ngayo nangendlela imidlalo ehlewe ngayo kungenzeka kuphoxeke iningi labalandeli bebhola eMzansi.
Kusobala-ke ukuthi yonke imidlalo ye-TKO kulokhu ibonakala izoshuba futhi idale ukugedla kwamazinyo nokukhala kwabaningi.
Imidlalo elandelayo yamakota fayineli ibukeka ilukhuni kowo wonke amaqembu nokho iconsisa amathe kubalandeli bebhola laseMzansi.
Umdlalo ozihola phambili ngokushuba nokuveza ngokusobala ukuthi kuzobe kuhlehle kukikize nofishi ophakathi kweMamelodi Sundowns neSuperSport United.
Lamaqembu awasePitoli womabili kanti ukuhlangana kwabo kuhlala kuqhuma nhlavana kubemnyama emini futhi kuvalwe nangomuntu emnyango ngendlela ekugcwala ngayo.
ISundowns iqhathwe nomakhelwane iSuperSport United emva kokuhlula iPolokwane City ngo 2-0 emdlalweni obuse Lucas Moripe Stadium.
Lapha iSundowns ibukeke isashisa bhe futhi ingabambeki emva kokuwina nokuhlula iZamalek ekuhambeni eGibhithe kwifayineli yeCaf Champions League.
Kulomqhudelwano amaSandawana iwona avikela isicoco njengoba adla iKaizer Chiefs ngesizini edlule.
Umqeqeshi weSundowns uPitso Mosimane uthe noma ezakhe zibukeka zikhathele emva kwemidlalo ye-Caf Champions League kodwa kuzofanele zikhombise ukuthi zingoshampeni base Africa futhi bangajabula ukuyivikela inkomishi abayiwina nyakenye.
UMosimane uyavuma ukuthi ukuhlulwa yi-Cape Town City ngo 2-1 kwiligi ngempelasonto kubathusile kodwa-ke kufanele kukhunjulwe ngendlela abake bagqilazeka ngayo.
“Awukho umdlalo olula kwiCaf Champions League, kanti nokuhlala uhamba uya ngaphandle kuyawuhlukumeza umzimba. Mina angifuni ukukhala yingakho ngithi asiqine futhi sidlalise okwamaqhawe. Abadlali bami ngiyabathemba ukuthi bazobuye bahlangane babe yimbumba, asikhumbuleni singakhohlwa oshampeni phela laba,” kusho uMosimane.
Umqeqeshi weSuperSport United uStuart Baxter uthi yena ubheke umdlalo olukhuni gnendlela eyisimanga, neqembu eliyowina eliyobe linenhlanhla.
“Kulukhuni kwasatshe ukuqagula umphumela uma kuhlangane lamaqembu ikhakhulukazi emidlalweni yezinkomishi njengeTKO.”
Kanti iChiefs yona izobhekana neFree State Stars eMoses Mabhida Stadium.
AmaBhakaBhaka wona azobheka nomakoti beligi iHighlands Park
Isiyonke imidlalo yeTKO imi kanje:
NgoMgqibelo, 5 kuLwezi
Baroka FC vs Cape Town City – Peter Mokaba Stadium – 3pm
Mamelodi Sundowns vs SuperSport United – Lucas Moripe Stadium – 6pm
Orlando Pirates vs Highlands Park – Orlando Stadium – 8pm
ngeSonto, 6 kuLwezi
Kaizer Chiefs vs Free State Stars – Moses Mabhida – 3pm